Halkan kala xiriir gurmadka J. Soomaaliyeed ee Norway ee Baardheere. - NorSom News
Halkan kala xiriir gurmadka J. Soomaaliyeed ee Norway ee Baardheere.
Gudi soomaaliyeed oo iskood isku xilqaamay ayaa maalmahan baraha bulshada iyo meelaha ay dadku ku kulmaan ka waday lacag uruurin loo sameynayo dhibaatada ka dhalatay fatahaabada magaalada Baardheere.
Waxeyna sidoo kale lacag uruurin ka socotaa barta internetka ee Spleis.no(Riix linkiga)
Waxaana sidoo kale socdo abaabul xoogan oo lacag uruurin balaaran ay jaaliyada soomaaliyeed ee Norway ugu sameyneyso magaalada Baardheere. Wixii arintaas ku saabsan kala xiriir gudiga gurmadka baardheere:
Maxamad Haji Farah – 94731848
Yusuf Bile Kahie – 48108186 For norsk:
Anisa Mahamed Madoobe – 94114233
Mohammed Isak Abdullahi – 94143585
Ka qeybqaado gurmadka baardheere:
Previous articleDowlada oo ogolaaneyso kulamada 50-ka qof, hadii ay buuxiyaan shuruudahan.
Next articleRun miyaa in Norway ay sharci siineyso 1600 qof soomaali ah oo diidmo heystay?